Tag: rfm kuongorora | Martech Zone
Tag: rfm kuongorora
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvebhizinesi nyowani kana rakamisikidzwa kuve nechokwadi chekuti vane mari inowirirana. Kunyangwe uine bhizinesi ripi rauri, kudzosera vatengi inzira yakanaka kwazvo yekumisikidza mari yakagadzikana. Chikamu chechisikigo cheizvi zvakadaro, ndechekuti vatengi vacharasika nekufamba kwenguva kuti vanyarare. Kugadzirisa kurasikirwa mune churn, bhizinesi rinogona kuita zvinhu zviviri: Wana vatengi vatsva Shandisa nzira dzekuhwina zvekare zvekare. Nepo vaviri vari
Dhatabhesi kushambadzira ndeye zvese nezvekunongedza maitiro, huwandu hwevanhu uye kuita fungidziro analytics pane ako tarisiro kuitira kuti uvashambadzire kwavari zvine hungwaru. Ini chaizvo ndakanyora chirongwa cheyakagadzirwa makore mashoma apfuura kuti zviverengere kunyorera vanyori veemail zvichienderana nemaitiro avo. Izvi zvaizobvumidza mushambadzi kuti aparadzanise huwandu hwevanonyorera zvichibva nekuti ndiani ainyanya kushanda. Nekunongedza maitiro, vatengesi vanogona kudzikisira mameseji, kana kuyedza mameseji akasiyana, kune avo vanonyorera avo